Iimpawu, indlela yokuphila kunye nokhathalelo lwe-zebrafish | Ngeentlanzi
Enye yeentlanzi eziqhelekileyo nakweyiphi na i-aquarium yile intlanzi yeqwarha. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zolu hlobo kwaye kuyaziwa ngokuba yi-vertebrate yokuqala ukuba yenziwe. Igama layo lenzululwazi ngu UDanio Rerio. Yintlanzi ye-osteíctio actinopterygium, yeyoku-odolwa kwe-cypriniformes kwaye usapho lwayo yi-Cyprinidae. Kule nqaku siza kuthetha ngeempawu zayo, ukutya kunye nokhathalelo oluyimfuneko kwii-aquariums.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge-zebrafish? Qhubeka ufunda.
2 Uluhlu kunye nendawo yokuhlala
4 Ukutya kweZebrafish
5 Ukuveliswa kwakhona
6 Unonophelo oluyimfuneko
Bazintlanzi kunye ubude obumalunga neesentimitha ezi-5. Umzimba uphakanyisiwe kwaye unefusiform. Ngokungafaniyo nezinye iintlanzi, inesiphelo somqolo kuphela kunye nomlomo oqinileyo ojolise phezulu. Oku kubangelwa luhlobo lomhlathi ongezantsi obizwa ngokuba kukuqengqeleka. Inesibini sezitshini ezintle kakhulu ezinokubonwa kuphela xa isilwanyana simiswe nkqo. Amehlo abekwe embindini.
Ayinamazinyo okanye isisu kwaye ityisa isebenzisa iigill spiny ukufunxa ukutya. Xa sihlalutya icala, sinokuqonda 5-9 imivimbo eluhlaza okwesibhakabhaka. I-operculum iblue kwaye indawo yangaphakathi imhlophe ngombala opinki. Le migca yiyo eyenza le ntlanzi ifumane igama le-zebrafish.
Inika i-dimorphism yesini kuba amadoda nabasetyhini banemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu. Imazi ngokubanzi inkulu kunendoda kwaye inombala ongasemva wesilivere emzimbeni wayo. Kwelinye icala, indoda inemibala yegolide.
Uluhlu kunye nendawo yokuhlala
Olu hlobo lwendalo lufumaneka kwimisinga esemazantsi mpuma engingqi yeHimalay, ziyafumaneka nakwindawo I-Indiya, iPakistan, iBangladesh, iNepal neBurma kwezinye iindawo. Kule mimandla unokufumana inani elikhulu leemodeli. Sinokuzifumana nakwamanye amasimi erayisi, kuba afuna idama lamanzi kunye nenkqubo yokunkcenkceshela. I-Zebrafish ithatha ithuba lokuhlala kule ndawo kwaye iphinde ivelise.
Ngokuphathelele indawo yokuhlala, inokufumaneka ekuhlaleni imilambo, imisele, imijelo. amachibi kunye nayiphi na indawo yasemanzini imisinga yayo engakhawuleziyo kakhulu okanye emi.
Olu hlobo luyabunyamezela ubukho babantu kakuhle kwaye luhlala kunye nabo. Ngenxa yesi sizathu yenye yezona ntlanzi zixhaphakileyo kwiitanki zentlanzi. Ukuziqhelanisa nokuhlala kwindawo ezihlala abantu kubangelwa zizikhukula ezibangelwa ziimvula. Oku kuye kwenza i-zebrafish yahlengahlengiswa kumaqondo obushushu amaninzi ukusuka I-6 degrees Celsius ukuya kwi-38 ngaphandle kwengxaki. Olu luhlu lwamaqondo obushushu alubonakali kwiintlanzi ezininzi.
Singayifumana le ntlanzi eMelika ngenxa yokungena kwezi ndawo zokuhlala ngenxa yokukhutshwa okukhulu kunye nokubaleka kwemizekelo kwiifama zentlanzi. Banokufumaneka eCarlifonia, eConnecticut, eFlorida naseNew Mexico. EMzantsi Melika kukho iisampulu eColombia.
I-Zebrafish sisilwanyana esihlala kunye nesisebenzayo. Umsebenzi wayo wenzeka emini. Ziyaphathwa ngesanti kwaye kukho izigcawu zentlalo phakathi kwendoda nebhinqa. Iinkunzi ezongamileyo ziziphatha ngendlela enengcwangu, ziluma zize zileqe ezinye iintlanzi ukuphawula indawo yokudibana. Ukuzala kuzala kwezi ndawo.
Benza amaqela adadayo ngaxeshanye kwaye angatshintsha indlela yangoko nangoko ngaphandle kokungqubana. Olu tshintsho oluhambelana nolungelelwaniso lwehlabathi lwenziwe ukoyikisa irhamncwa ngokunika imbonakalo yokuba likhulu.
I-Zebrafish ibonisa iimpawu zokulumkisa xa zibona irhamncwa, oku kwenziwa ngokujonga okanye ukubonwa, indlela abaziphethe ngayo iyaphazamiseka, babonisa uburhalarhume kwaye banciphise ukondla kwabo rhoqo.
Ukutya kukutya. Uninzi lokutya lusekho kwiikholamu zamanzi. Ngokuqhelekileyo badla i-zooplankton kunye nezinambuzane zaselwandle. Ngamanye amaxesha ihamba ngaphezulu emanzini isondla izinambuzane ezisemhlabeni ezifela apho. Ii-arachnids ezincinci zizintandokazi kunye nemibungu yengcongconi.
Baphinde batye iintshulube, i-crustacean encinci, i-phytoplankton, batye okunye ukutya okwahlukileyo ukuba okona kutya kwabo kungafumanekiyo
Kususela kwiinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu xa i-zebrafish ifikelela ekuvuthweni ngokwesondo. Ziyakwazi ukuvelisa kwakhona unyaka wonke. Imazi ibeka amaqanda angama-200 kwaye ukukhula kombungu kukhawuleza.
Kuthatha kuphela malunga neeyure ezingamashumi amathathu anesithandathu emva kokuchumisa ukuba umbungu uqalise ukubumba nokwahlulahlulahlula ube ngamawaka amaseli amancinci. Ezi seli zihambela emacaleni e-yolk kwaye ziqala ukuyilwa kwentloko kunye nomsila, eyokugqibela iyakhula ize yohlukane nomzimba ngokuhamba kwexesha isikhupha siba sincinci kuba siphethe ukondla iintlanzi.
Ezi ntlanzi zizolile kwaye kulula ukuzinyamekela. Kuba ekuziphatheni kwabo sabona ukuba bahlala behamba ngesanti, kunyanzelekile ukuba ukuba ufuna ukuba nabo kwi-aquarium, Ubuncinane kukho iikopi ezi-6. Eli nqaku linokunceda ukwenza indawo entle enamanzi oluntu.
Kuyimfuneko ukuba i-aquarium inendawo eyaneleyo ukuze ingabinangxaki xa iqubha. Kufuneka kukhunjulwe ukuba ezi ntlanzi ziyakhawuleza kwaye ziyadada kwaye indawo yazo yendalo kufuneka iphinde yenziwe kwakhona. Umgangatho wezantsi ye-aquarium yinto ebalulekileyo, kubalulekile ukuba ube nefilitha yebhayiloji.
Kuyacetyiswa ukuba kubekho umaleko wegrabile ongasuswanga kakhulu kwaye ongenanto enokulimaza intlanzi. Ukubeka izityalo kwioksijini ye-aquarium sisigqibo esihle. Iqondo lobushushu kufuneka libe malunga ne-28 ° C oku kuthathwa njengokufanelekileyo kodwa kuyasinda kumaqondo obushushu phakathi kwama-20 ° nama-29 ° C. Ngala maqondo obushushu kunokuthiwa baphila kakuhle nokuba kunjalo xa amaqondo obushushu engaphantsi kwe-27 ° C, kubonakala ngathi ixesha labo lokuphila liphantsi, i-pH efanelekileyo ingu-7.3 ukuya ku-7.5 ngobunzima be-5 ° ukuya kwi-15 ° dGH.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso ungonwabela i-zebrafish yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zeZebra